Ezibuhlungu kubashayisibhakela kumiswa izimpi ebezibhekwe ngabomvu - Impempe
Ezibuhlungu kubashayisibhakela kumiswa izimpi ebezibhekwe ngabomvu
Sebephinde bashayeka kanzima abashayisibhakela okubalwa nompetha womhlaba esisindweni seFlyweight, uMoruti Mthalane, kulandela ukumiswa kwezimpi ebezizoba seThekwini ngeSonto.
UMthalane ubezobe evikela ibhande lakhe le-International Boxing Federation (IBF) kulezi zimpi ebezihlelwa yiTono Promotions.
Inhlangano eyengamele ezamankomane kuleli, iBoxing South Africa, imemezele ukuthi ngeke zisaqhubeka lezi zimpi ngenxa yokwehluleka kwabebezihlela ukugcina yonke imigomo nemibandela efanele.
“IBoxing South Africa ithatha leli thuba ukwazisa umphakathi izindaba ezingezinhle zokumiswa komcimbi wesibhakela weTono Promotions, obuzoba ngeSonto mhlaka 20 kuDisemba 2020, eThekwini. Lo mcimbi ubuzoba nempi lapho umpetha we-IBF esisindweni se-flyweight, uMoruti Mthalane, ebezovikela khona ibhande lakhe kuJayson Mama. Kwenye uNkululeko Mhlongo noWalter Dlamini bebezobanga ibhande le-WBA esisindweni seMiddleweight,” kulanda lesi simemezelo seBSA.
Akuzona ezokuqala lezi zimpi ukumiswa kodwa ezinye eziningi bezimiswa ngenxa yokutholalaka kokuthi abashayisibhakela noma izikhulu sezihaqwe yigciwane iCovid 19 elidla lubi kulezi zinsuku.
I-BSA iqhube yathi izame konke ebingakwenza ukuba lo mcimbi uqhubeke kodwa kwanhlanga zimuka nomoya. Lezi zimpi bese zibhekwe ngabomvu kwazise sesiside isikhathi zimisiwe ngenxa yokubheduka kweCovid 19.
Previous Previous post: Uphinde wasala encela izithupha umqeqeshi weLeopards ezakhe ziphinda ziphucwa iqatha emlonyeni
Next Next post: Ufisa bavale ngokuwina uWilliams weSuperSport esefomini enhle kulezi zinsuku